Holandy: Firenena voalohany ao Eoropa ahitana tsy fitongilanana antserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2019 4:11 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Filipino, Italiano, Türkçe, Français, Nederlands, Español, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Mey 2012)
Andro iray hankalazaina any Holandy ny 8 May 2012 noho izy lasa firenena voalohany ao Eoropa miaro ny olom-pireneny amin'ny alalan'ny fametrahana ao anaty lalàna ny tsy fitongilanan'ny aterineto.
Nametraka ny fiarovana ny fiainana manokana ho an'ireo mpiserasera manoloana ny fihainoina resaka amin'ny finday sy ny fanapahana aterineto ataon'ireo mpamatsy tolotra aterineto (FAI amin'ny teny Frantsay) i Holandy, ka tsy ho afaka hanapaka ny fifamoivoizan'ny mpiseraera intsony izy ireo raha tsy hoe voaporofo fa ho amin'ny tombontsoam-bahoaka izany.
Mari-pamantarana sy ohatra ho an'ny firenena hafa ao Eorôpa sy manerana izao tontolo izao izany lalàna izany. Araka ny filazan'ny Bits of Freedom, vondrona mpikatroka izay niaro ny fandaniana ny lalàna, tena manan-danja tokoa ho an'ny tsiambaratelon'ny mpiserasera ireo fehezan-dalàna vaovao ireo.
Ankoatra izany, ahitana fehezan-dalàna manohitra ny fihainoan-dresaka an-telefônina, mametra ireo mpamatsy aterineto tsy hampiasa teknolojian'ny fanaraha-maso (deep packet inspection – DPI) ny lalàna. Mety afaka manao izany amin'ny toe-javatra voafetra izy ireo, na amin'ny fankatoavana mazava avy amin'ny mpiserasera, izay mety hialan'ny mpiserasera amin'ny fotoana rehetra. Nahasarika ny saina ny fampiasana DPI rehefa niaiky ny KPN fa nanadihady ny fifamoivoizan'ireo mpiseraserany mba hanangonam-baovao momba ny fampiasana fampiharana sasany. Mamela ny fihainon-dresaka an-telefônina nahazoana didy ara-pitsarana ny lalàna.
Fanampin'izany, ahitana fehezan-dalàna fanomezan-toky ny lalàna fa tsy afaka manapaka ireo mpiseraserany ireo mpamatsy tolotra aterineto raha tsy amin'ny andiana toe-javatra tena voafetra. Tena zava-dehibe ho an'ny fiarahamonin'ny tia manara-baovao ny fahafahana miditra aterineto, ary afaka manapaka ireo mpiserasera amin'ny antony maro samihafa ireo mpamatsy tolotra aterineto ankehitriny raha ny fepetrany fototra no jerena. Mamela ny fanapahana ny aterineto ny fehezan-dalàna raha toa ka misy ny tranga hosoka na tsy mandoa ny saran'ny aterinetony ny mpiserasera!
Tehaka ho an'i Holandy!
Lisansa Creative Commons 3.0 avy amin'i erikwestrum
*Na dia mbola asa eo am-panatanterahana aza izany, navoakan'ny fikambanana tsy miankina Bits of Freedom ny dikan-teny ankapobeny ny lalàna vaovao.
Tantaran'ny Holandy farany
Azia Atsinanana 09 Jona 2021
Nosakanan'ireo mpikatroka Holandey momba ny toetrandro ny fidirana ao amin'ny Minisiteran'ny Toetrandro hitakiana ny famoahana ny “Shell Papers”
Fanoherana 15 Marsa 2021
Mandefa taratasy any amin'ny ICC (CPI) momba ny famonoana ireo mpitarika ara-tsosialy ireo Kolombiana mpikatroka
Amerika Latina 30 Avrily 2019